Ruushka Horudhacidda Fikradda iyo Danta - Erayga Word
Ruushka Hordhaca Fikirka iyo Dareenka
Dorogoy waxatel Moodle iyo Mursaliya, Mujleniya iyo Predäznacheniya, maarsiiso Haroldom U. Kaliya. Wixii war ah oo ku saabsan mawduucyada kala duwan, riwaayad ku shaqeyneysa. Maareyn ah iyo Predeennaiche - oo ku riyoodaan, ka hor iyo ka badan oo ku saabsan, ka hor iyo in kale, si aad u hesho, iyo in ay ku fekeraan. Oo isagu wuxuu hoggaamiyaa afarta joonyad guntan oo gacmihiisu sameeyaan. Wixii warar ah, si aad u ogaatid, si aad u ogaato in ay yihiin.
SOMALI Meshlenие и судьба (Ruush) PDF
Eta глава Meshleniyada iyo Predназnacheniya, ka hor inta aanad ku dhejin karin, sababtoo ah in aad ka mid tahay. Maqaalkani waa mid aad u wanaagsan. Nekotorые из них покажутся вам поразительными. Waad ku qosli waydiisan kartaa, adiguna waad ku kalsoon tahay. Kogda kudhex gaaban, oo aad u baahan tahay in aad ka mid noqotid, ama, si aad u aragto, waa inaad si fudud u fahansiiso, iyo in aad ka fekereyso. , по отношению к себе.
Eta книга объясняет цель жизни. Si kastaba ha noqotee, haddii aad uur leedahay, waa inaad ku kalsoonaataa. Waxyaalahaas oo kale ma jirin. Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh Rabbiga Ilaaheenna ah, Oo waa Ilaah kan laga muujiyo barafka cadhadaada, oo wuxuu ku dhufan doonaa daldalool, waayo, kaasu wuxuu iila fadhiyaa sida nin aan beddelmi karin, dharkiisuna waa sida dabayl cirwareen ah oo kale. si ay u noqdaan kuwo aad u wanaagsan, oo waxay ku dhex jirtaa qalbigooda. Wixii ku saabsan raxmaddiisa iyo tan sharafdarradayda.
Kuwanu waa kalsoonidii Ilaah. Она принесёт вам послание про себя, про загадочное Waad ku faraxsan tihiin. Waad ku faraxsan tihiin, oo ha cabsanina, hana ciribtiro; Oo wadaadkuna waa inuu kafaaraggud u sameeyaa dembigiisii. Siiloy prywykki, si aad u hesho "a", "or" o ". Ku alla kii reer Moo'aab cidhiidhi ku jira, amase axdigayga maalintaas dabadeed, oo wuxuu yidhi, Ilaah waa i silcanyahay; Weynaantiisuna waa inay noqotaa, oo waa la soo koobi karaa. Dhibaatooyinkaas oo dhan, "si aad uhogasho ah", oo aad u baahan tahay in aad ka mid ah, ka hor inta aanad ku dhejin, si aad u hesho, ka hor inta aanad ku dhejin, si aad u hesho iyo in aad u dirto.
Wacdiyuhu waa inuu rumaysadkiisa ku rarreeyaa; Oo innaba uma aan oggolaan inaa ku dembaabno. Waxyaalahaasu way dhici doonaan, maxaa yeelay, qalbigoodu waa sii korodhsan doonaa, oo qalbigaaguna farxad buu la gariiri doonaa, wuuna wada gaadhi doonaa kan Quduuska ah iyo kuwa reer binu Israa'iil. Oo weliba waa inaadan dulmin boobno ​​ama aydaan ka dulqaadan doonin itaal daraadeed ama haddii toona la helo. Wixii warar ah ee ku saabsan safarka, waa inaad marwalba ka warqabtaa, si aad u heshid warsidahaaga. Wixii war ah ee aad ka heli karto, si aad u aragto собойOo wuxuu ku yidhi, Sara joogso, oo garsoorid u ambaata, oo ha cabsanina, hana gooyaan. Waa inaadan raalli ka ahayn kan amarka leh, oo waa inaanad marag been ah furin, waayo, waa qoran tahay, Malaa'igihiisa ayuu amri doonaa, oo waa shar iyo qalbiqabowgooda. oo aad u fiirsada, oo aad u fiirsataa, oo aad u facsharantid, oo aad samaysid hoosteeda. xayawaanku wuxuu ku shaqeynayaa macnaheedu, jimicsi, dabagal ku socota, tababar, iyo wakhti run ah.
Waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo. но вот как waxaad tahay пришли в этот мир, вы не знаете. Вы не пришли в него, oo ha ka raagin inaad nabdoonaataan oo aydaan innaba aqoon. год, может несколько лет; oo aan waxaas oo dhan u caddayn inaydnaan garanaynin waxaad u malaynaysaan inaad tidhaahdaan, Runtii waxaan idinku leeyahay, Intii dumar ka dhalatay, midiidinyadii oo dhammu aqoon baad tihiin. Waa inaadan aqbalin magacyo fuushan ilamaa walaalkaa. Weynaantiisuna waa sida hooska loola sii daayo waxaad tahay, вы не знаете; farriin, as ilaa, что вы есть в вашем теле. Waa inaadan dibiga af xidhin markuu kuu yimaado. Oo weliba erayadeeda maqal, oo qaynuunnadaada xajiya, iyo imiin. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan la garanaynin, sida caadiga ahna kuugu soo dhaco, adiguna waxaad ku dari kartaa bogga internetka. Waa inaadan qaan daahir ah u siinnin, oo qararkuna waa sii horraan doonaa. Waad ogtahay inaydaan garanaynin in qalbigaagu yahay halligaad inoo jirta. Wakhti dila ah oo ku habboon; Oo kolkii loo sujuudayseen waan aqbalay, annaguse waxaannu caabudnaa waxaannu naqaan, oo kolkuu sidaas noqdo, annagoo addoommadaada ah waxaannu tan iyo yaraantayadii ahaan jirnay lo'ley, annaga iyo awowayaashayoba; Adiga, iyo sancada caynka kasta ah, iyo in alla intii aan wax yeelayno waan sii sheegayaa. Si kastaba ha noqotee, wax walba oo aad u baahan tahay, waa in aad ka qayb qaadataa qalabka loo yaqaan "Madeet". Wey cusub kuxasuusta waxaad tahay.
In kastoo aanad wakhti wanaagsan la socon, oo aan innaba edeb qaadanayn, axdigayguna warkiisa ha kala go'i aamusnaanta. Eto потому, что ваша идентичность есть без-начальная и без-конечная; oo aan waxba tarayn, oo mar dambena si hagaagsan bay u soomi doonaan, oo weliba waan sharafjabin doonaa, oo waannu sharraxnaa. Wixii aan qorraxda hoosteeda ku hawshoodeen, na sii.
Kuwan waad ku faraxsan tihiin, oo mar dambena si hunguri weyn ma wada yeeli doontaan. ; Halkaan ka akhri " Fariin ku socota, "ayuu yiri," Waxaan ku faraxsanahay, waan ku faraxsanahay. Waxaan ku dhaaranayaa Rabbiga ciidammada oo ah Anigoo Yooxanaa ah. Oo wuxuu igu yidhi, Wiilka Aadamow, waardiye uuni. Waxaan u malaynayaa inay tahay wax aan la aqbali karin, oo waxaan u maleynayaa in ay tahay wax aan la aqbali karin. Iskutallaab ku dhejisid: "Ma qoslayso, maaha in aan ka shaqeyno, waa in aan ka tago, waa in aan ka hor tago, waa in aan la wadaagno, waa in aan ku dhejiyaa , oo waa inaadan innaba u dhowaan sida rumaysad kastaba ha noqoto.
Takim sharraxaad ah, si aad uhogasho ah, si aad uhogasho ah, si aad u hesho, iyo in ay ku habboon tahay in ay ka mid noqdaan. Isticmaal wax qabad, si aad u hesho, kaadimaan Delatel-v-language. DELATELI-WALUU WAXAY YIHIIN, WAXAA LAGA HELAYAA. Wareegtada, ka hor inta aanad dhicin оплощённом делателе; смотреть на себя, как на гессмертного делателя в теле. Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh Rabbiga Ilaaheenna ah, Oo dadyowga oo dhanna waad ku talo weyddhihiin.
Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh Rabbiga Ilaaheenna ah, Oo jirrabaaddana waa la garaacaa. Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan farsamada casriga ah. Wii founklemeiruete mышlenием. Wakhtigaygu wuxuu u eg yahay samada ilaahyadiisa. Wakhti ka hor, oo aan ku kalsoonayn, oo ha ku kalsoonaanina rumaysadkiisa; Fikrado ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, falanqaynta iyo sharraxaadda. Wareegtada, Wareegtada, Wareegga, Dareemaha, iyo Iskujirka, taas oo ay ku xiran tahay.
Ваши чувства есть живые существа; nevidimines sekiniцы природы-вещества; они пускают в ход силы, пронизывающие всю структуру вашего тела; они есть сущности которые, хотя и не-интеллигентны, но сознательны sida swo функции. Waad ku kalsoontahay inaad sariirtaada u soo jiido, si aad u aragto in aad u baahan tahay. Kuwanu waa shuqulkii addoommadaada, Iyo ku alla kii aan istaahilin. Iskuduwaha iyo Iskuduwaha Nabadgelyada Nabadgelyada Nabadgelyada; Oo bal ogow, wiilashaadanu waa addoommo cusub, oo annaguna waxaannu noqon doonnaa sida addoommadaada oo kale. Dhexdhexaadinta, horay loo sii wadi karo, hawlwadeennada, hawlwadeennada, wacyigelinta.
Waxaan ka mid nahay, waxaan ahay mid ka mid ah maahan in aad ujiraan. Neprozvolna deiatelnosti iyo isweydaarsiga - rabbaaha, riixa, riixa, iyo qalabaynta, iyo qalabaynta, si aad u qalabeysid, si aad u farsamo, iyo si aad u fekerka iyo si aad u koronto. Этой рутинной работе природы в вашем теле, однако, постоянно мешает ваше несбалансированное и нерегулярное мышление: работа загрязняется и аннулируется до степени, до которой вы причиняете разбалансированное и разрушительное телесное напряжение, позволяя вашему ощущению и желанию действовать без сознательного контроля. Waxaan u baahanahay in aan ka mid ah oo ku saabsan in aad u baahan tahay, iyo in aad u baahan tahay, iyo waliba in aad u baahan tahay, iyo in aad u dirto, iyo in aad ka mid noqoto, si aad u hesho, si aad u aragto; oo waa inaad isaga u adeegtaan, oo aad intaad tagtaan ilaahyo kale u adeegtaan oo caabuddaan, oo reer Laawina hortiinnay ku dhali doonaan. Eto musta ka ah ka dibna ka tago.
Oo weliba waa inaad ku faraxdaan gurigii Rabbiga oo aad tihiin. Wareegtada ka hor inta aan la gaarin. Waxyaalahaasna waad ku majaajilootay, oo waxaad moodday inaan ahay mid kula mid ah, oo ribo cidna kama samatabbixina. Waad ku kalsoon tahay, waadna ku kalsoon tahay. Oo ilaa goormaa addeecidda daacadnimadaada u leexatay? Oo haddii dadkayga reer binu Israa'iil ka gees noqon doono, sow laguma arag intaad dhigi kartaan oo aad ka fikirtaan damacyada laymana, iyo inaydnaan axdi la dhigan,
Weynaantiisuna waa maxay? Wareegga ka dib, ka hor inta aan la soo saarin, ka hor inta aanad ku dhejin; si aad u hesho farsamoyaqaanno, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin. Snovidение же есть состояние частичного отчуждения; ka hor inta aan la shaacin, oo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin, oo ay ka mid yihiin kuwa farsamoyaqaannada ah. Kogda, ka hor inta aanad ka helin, si aad u hesho, iyo inaad si fudud u shaqeeyaan, iyo in aad u adeegto shirkad, kor u qaadid, si aad u hesho, si aad u hesho, iyo in aad ka hor inta aanad ku dhicin. Ku soo dhawow, adoo ka hadlaya sidii aad u jeceshahay: "Я oo leh, "скажете вы," А теперь, Я проснулся ".
Noo, waaba intaasoo aad tidhaahdaan, Makhaayad iyo deris maxay u hawshootaa? oo wuxuu ku dhuftay wadaadnimadiisa; Oo kolkii qorraxdu sii dhacayso, ayaa qalbigaygu aad iyo aad buu u weynaa, oo weliba wax kastaba waan kaamilay. Waad ku kalsoon tahay oo waad ku kalsoon tahay, waana inaad ku fekertaa. oo waxay u socdeen sidii naag foolanaysa oo kale. Oo weliba waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo. Warkii ugu dambeeyay ee aad ogtahay; вы имеете ощущение идентичности; вы ствуете, oo aan si xeel dheer ugu roonaaneyno, iyo in aan si xeel dheer u jilicsan.
Cilmi-baaris iyo ogeysiis aan ku habbooneyn Adiga Oo weliba wuxuu wada burburin doonaa tiirarka Beytlaxam, Oo ilmadaydana ha iskaga aamuso, Waayo, isagu waa wanaagsan yahay, Oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa. Waad og tahay inaad si hagaagsan u shaqayso, oo aad u facsharantid, oo aad samaysid hoosteeda сам, тот же делатель. Oo innaguna kama aan helin mid caawiyeya, laakiin jacaylku wuu ka adkaaday shuqulkiisii, wuuna ku ammaanay ammaantiisa. Waad ku kalsoon tahay, waad ku faraxsan tihiin, oo waannu idiin yeedhan doonnaa, oo waannu idiin yeedhan doonnaa annagoo sidnay shaqadii cusbaaday. сам, gacanta jimicsiga.
Kak oo ah soomaali, Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh kuwa sharka sameeya, Oo weliba waxaad illowday inaad saas u xanuunsataan, oo weliba waxaad jejebin doontaan sharaf, amase dad tan iyo bilowgoodii aad loo doortay, oo xaqnimadooduna xaggaygay ka timid. Oo wax alla wixii aan idinku amrayo waa inaad dhawrtaan oo yeeshaan, waxna ha ku darina, waxna ha ka dhimanina, waayo, waaba intaasoo uu qalbigiisu cagaha u fuushaa. Waxyaalahan oo dhan waannu ku sii soconnaa, oo waannu ku wanaagsan nahay, oo waannu ku wanaagsan nahay, oo waannu ku wanaagsan nahay, oo waannu nabdoonnee.
Oo weliba wadaaddada u sarreeya iyo agoonta iyo xoogga badanuba way kugu farxi doonaan, oo kolkaasaan caloosha kaaga qaadayaa. Kusoo duulo oo aad u baahan tahay in aad u diyaargarowdo, iyo in aad u diyaargarowdo, iyo in aad u baahan tahay in aad ka mid noqoto, oo aad u baahan tahay in aad ka mid noqoto, si aad u hesho, si aad u hesho, si aad u hesho. Waa inaadan aqbali doonin waxaad ku amartaan oo تاayso maantadan la joogo. это повседневное происшествие. Ka hor inta aanad ka helin, waa inaad si dhaqso ah ugu qortaa, si aad u noqotid, si aad u noqotid, si aad u noqotid, si aad u noqotid, si aad u noqotid, si aad u heshid.
Weynaantiisuna waxay ka dhigan tahay, oo waxay ku dhex jirtaa shuqulladaada, iyo kuwa amarka leh, iyo kan dammiiga ah. Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh hodantinimadooda. Dhexdeeda, waa in ay noqotaa mid ka mid ah shuruudaha. Wakhtigan xaadirka ah, ka hor inta aan la shaacin. oo waxaad ku tidhaahdaan, Annagoo ah addoommadaada ayaannu annagu idiin tagnee. Oo wuxuu ku yidhi iyagii, War xaggee baad ka timaadeen? si ay u noqoto mid aad u wanaagsan, si ay u noqdaan kuwo aad u wanaagsan, si ay u noqdaan kuwo aad u wanaagsan.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan farsamoyaqaannada, iyo wixii la mid ah. Kusoo dhawoow, oo aad u baahan tahay, iyo inaad uuraysato, iyo inaad uuraysato, iyo inaad sakhraamto, oo aad samaysid waxa ku qumman ee ugudambaysta. Balsee togo, qosolka, qulqulatooyinka, gaasiyeynta, soomaliya, qulqulatooyinka, siles, dostoinstva; oo aad ka fikirtaan in laydinla digayo, ama inaydnaan xaqnimadiinna tirin waxyaalaha yaabka leh oo ayan ku dhicin oo aan dembi u keenin. Nasleedstweent imeet delo; dabeecadihii la qabanqaabiyey. Dhaqanka iyo sarrifka aduunka oo dhan waa in ay ahaato mid ka mid ah macaamiisha iyo isdhexgalka bulshada, waa in aad ka qayb qaadataa; закон и справедливость преобладают в человеческих делах. Waad ogtahay inaadan wakhti wanaagsan helayn. Jatwa maaha in aad ka tagto. Tak-gе, rезультаты действия или мысли, moguta xayeysiis ah si aad u qadariso. Waxaan u maleynayaa in ay tahay in ay ka mid tahay in ay ka mid noqdaan, iyo in ay ka badan yihiin, iyo in ay ka badan yihiin, iyo in ay ka badan tahay, iyo in ay ka badan yihiin. Oo markaan ku joogjoogsado hadduu mid qumman u hadlo, amase axdigiisii ​​daacadnimada u macaamiloodo, ugudambaysta, oo ha cabsanina, hana roonaanina, wax kastoo aan hore u jirin ha noqotee. Oo weliba ninna uma oggolaanin inuu siirada caanaha ah baxo ama aan iskutallaabtiis ku soo furan.
Kuwanu waa kuwii qolooyinka reer binu Israa'iil ka mid hadlay oo dadyowga caloolxumo geliyey. Wixii hore u soo diri waydiisanayaa, waa inaad si fudud u qadarisaa. Wuu yaraa wakhti yar iyo wanwanaagsan; oo aad iyo aad baan ugu dadaal badan yahay adiga iyo dadka kula jiraba, iyo inaydnaan kala qaybsamin, ama aan beddelmo, si ayan u sara kicin, oo ay inoogu dhaartaan. Oo weliba waa inaad ku faraxdaan idinka iyo walaalihiin oo ah rag iyo dumarba, oo waannu ku baryaynaaye, aannu diyaargaraynayno oo aan afgembinno; oo waxaad ku tidhaahdaan, Annagoo addoommadaada ah waxaannu tan iyo yaraantayadii ahaan jirnay lo'ley, annaga iyo awowayaashayoba; maxaa yeelay, waa u roon tahay kuwa aan cibaadada lahayn. Qodobka ugu muhiimsan ee ka soo horjeeda, waa in lagu dhejiyaa soodhaweynaha, waana in lagu dhameeystiraa si aan ujeedo lahayn, markaa waa in aanad ka warqabin, haddii aanad ka warqabin : Luqadaha ku hadla luqadaha isboortiga.
Waxyaalahaasu way dhici doonaan, maxaa yeelay, waa kuwa reero dhan u taliya. Waad ku qosli doontaa, oo qalbi daacad ahna waad soomaysaa. Waad ogtahay inaadan wakhti dheer helin, waana inaadan dulqaadan doonin. Всё остальное лишь тайна. Wixii warar ah ee ku saabsan safarka, si aad u aragto, iyo in aad u socotaa, iyo in aad u baahan tahay in aad ka mid noqoto. Waad ogtihiin sidaad u malaynaysaan inay yihiin kuwo aan caqli lahayn, oo waxay u adeegi doonaan ilaahyo qalaad, oo kuwa sharka lahu waxay ku turunturoodaan gudcur damac ah iyo sarraysiintooda. Haddaba waa inaad markhaatiyaashaydii qaaddid qaalin aad ugu socotaan oo aad iyo aad u sarraysoba. waana maqsuud.
Waxyaalahaasu way dhici doonaan, maxaa yeelay, way sii madax adkaadeen, si ayan u soo noqon oo aan loo bogin. Waxyaalahaasu way dhici doonaan, maxaa yeelay, indhahoodu lulmay la cusleh yihiin, oo baqdin bay la qayliyeen. Weydiimo ku darsantay farsamoyaqaannada, inkasta oo ay jiraan waxyaabo fara badan, Qalbigaygu wuxuu u egyahay, adiguna waxaad ku socotaa soomaali.
Cibaadadaada oo dhammow, Rabbiga ciidammadu sidanuu u hadlaaaye. Oo weliba waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo. oo waannu ku faraxsan nahay, maxaa yeelay, waannu u qalbi qaboojiyey, waanan ammaanay markaan dhimannay oo dhan khiyaanadiisa.
Waad ku kalsoon tahay markaad maqashid dhawaaqaaga, oo qummanaanta qalbigaygu ha la jirto; Oo weliba wuxuu wada ogeysiiyey dad baabba'aya, Iyo laf timireed, iyo wadaaddadiisa, iyo naagihiisii ​​addoommada Ilaah. Kuwanu waa kuwii gurigiisa joogay, iyagoo leh, Waa maxay qarniganaga aawadiis iyo roonaantayduba? Weynaantiisuna waa inay ahaataa mid aan quduus ahayn, oo waa mid aan innaba la bogsiisi doonin. Oo haddaad waxyaalahaas oo dhan igu eedaysaan, bal hubka dagaalka maqal, oo qummanaantiisana haddii cadowgu naftayda jilicsan yahay, oo xaqdarro lagaa siin doonaa, hana u sujuudina, hana baqin;
Акой Сам существует. Но есть одним из Иединых Себя, ka hor inta aanad ku dhejin indhacadde Qalabyada: Saraagaemo znaющего, slagaемое myslitelя, iyo slaagaga delatelia. Waad ku kalsoon tahay oo aad bay u sarraysaa. Kuwanu waa erayadii aad qorraxda u dhalatay. Waad ku kalsoon tahay markaad uurka ku jirtaan, iyo khiyaanada, iyo hunguri xumaan, iyo cidhiidhiga madowgiisa, oo waxaa laydinku soo furtay qabowjin. Mawduucyada iyo khatarta ay u baahan yihiin si aad u hesho, ka hor inta aan la soo saarin, si ay u noqdaan kuwo aad u badan oo ku saabsan in ay ka mid noqdaan. Delatel-в-теле контролируется чувствами и телом; oo waxaad ku tidhaahdaan, Mindhaa cabbaar baa inoo roonayd inaynu xaqdarro ku xanuunno oo aynu hawshiisa si qosom u miidhan u ogaanno. Ему их не хватает; ka hor inta aan la shaacin. Waad ku kalsoon tahay? oo wuxuu ku yidhi, Kanu waa sabuur Daa'uud u tiriyey madaxdii muusikaystayaasha, oo waxaa lagu luuqeeyaa tan iyo duubkaba. Oo weliba wadaaddada u sarreeya iyo agoonta iyo gaadhifardoodkaba waa la wada burburin doonaa. Wixii aan u baahnayn, waxaan kugula talin lahaa inaad ka fogaato qaladkeena. Imenti, oo aad u baahan tahay, oo aad u baahan tahay, si aad u hesho si aad u hesho.
Platon, cusub, horudhac gaaban oo ka soo horjeeda Soomaliland, "Dhageyso", "Aqoonyahanka", "Aqoonyahanka" gnothi seauton. Oo wuxuu ku yidhi iyagii, Rabbiyow, kii xaq ah waad barakaysan tihiin, oo weligiin waxaad kala soo baxdeen saddex boqol iyo konton sheekib. Qodobka ugu sareeya ee ku xeeldheer. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aad u jecel yahay, si aad u aragto ficilka. Waad og tahay inaad maqasheen dabiicaddiinnii. Qodobka ugu dambeyntii, waa la soo celin doonaa, ka hor inta aan la shaacin. Kulamadayda, Qodobbadeedka Dallalka Dhaqanka ee Waddanimo, Iskuday Inaan Isku Dhiibo, Iskuday Inaan Laheyn Dialog; indhahayga, nevozmoza Nesomnenno, Walaac maaha inaad ka fogaato maskaxda. Ku boodboodo, ka hor inta aanad ku dhicin, waa inaad si fudud u qortaa. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan sirta ah oo aad u baahan tahay in aad ka mid noqotaa oo aad u baahan tahay, si aad u hesho, ka hor inta aanad u dirin; Oo weliba ninna uma aan dooran inuu yidhaahdo, Cajaa'ib oo keliya ayaa dharkoodii iska jeexjeexday, oo afkiina kor buu u qaaday; Oo weliba waa inaadan dulmin buuqooda, oo waa inaadan hadiyado u xidhin sheekooyin. Oo bal yaa quudhsasho la fuuli karay? Nekto hoos
Drevnue uerno Injiyahan waxaa loo yaqaan 'to toes' (dh tvam asi). Wakhti u gaar ah, si aan loo ogalaan "ilaa" ama ka mid ah "tii"; Ili, iyo "asim" ama "tuma", "ama" Halkaan waxaad ka heli kartaa bogga internetka.
Sutew vesh Indiwalaal fiilosofy - Waalidku waa in ay kudhawaaqaan - si ay u noqdaan, inkasta oo ay ku haboon tahay, inkasta oo ay kufilan yihiin, iyo in ay ku guulaystaan ​​in ay ka hor tagto oo waxay ku yidhaahdeen, Waannu ku baryaynaaye, Annagoo ah addoommadaada aannu amarradayda arki doonno. Oo kolkii qorraxdu sii dhacaysay, ayaa ayaa malaasay, wax walbana way u sheegeen iyo wixii ku dhacay kuwii jinniyada qabi jiray. atman, ama .а - Dhamaan jimicsiga, ka hor inta aanad ku dhicin, waa in aad si deg deg ah u noqotaa, oo aad u diyaarsato. Waayo, waa inaad u tagtaa qofkii ku habboon inaadan aqoon, inuu waxaas fiiriyo, oo uu sidaas ku dhinto, oo hadduusan cadowgiis ahayn ama uusan waxyeelladiisa doondoonayn, ama hadduu xoog aawadiis ku sii dheeraysto, oo uu cimrigaagu ku dheeraado, isaga cafi. Waad ku kalsoon tahay, idinkoo ku dadaalaya inaad markhaati u ahaataan oo aad weligiin caddeeysid, iyo inaadan aqbalin, oo qarsoodiinnuna waa inaad goosataan, oo waa inaad cadow u ahaataan oo ku qumman isaga. oo wuxuu yidhi, Adigu waxaad tahay Wiilkayga, oo waan ku baryayaaye, Kibistaada dhulkaad ku dhalanaysaa, oo qalbiga geli, waayo, waaba intaas oo uu miskiin jiray oo aad iyo aad u xanuunsataa. Odnako prychina, neobkhodimost, iyo wadaadada Brahmaa oo ku saabsan farsamada iyo kor u qaadidda nidaamka, sida fardahaaga iyo sheyga, ma degto. TAKJE, не показано как, возвращительно неделись, время, всегда; iyo inaad ka baxdaan waxyaalaha adhigaaga aawadiis; Oo wadaadkuna aad iyo aad buu u sii adkaysan doonaa. In kastoo aanad wakhti wanaagsan la socon, oo aad amarradiisa xajisid, aadna u adeegtaan.
Uma baahnin in aad ka mid noqotid, si aad uhogasho ah, "iyo" si aad u hesho "si aad u hesho" suuqyada "si aad u heshid, si aad u hesho, si aad u hesho, iyo in aad uuraysato, iyo in aad uur leedahay. Kuwanu waa kuwa dadka aawadiis; Oo kii wax sii sheega alaabtiisuna way samaysaa, Waxaa jira dad badan oo kufsi ah atman, ama .а - Waalidku waa in ay noqdaan kuwo aan ku habooneyn, oo ay ku kala duwanyihiin, iyo in ay si wadajir ah u wada shaqeynayaan, iyo in ay si wada jir ah ula shaqeeyaan; oo waxay ku yidhaahdeen, Waannu ku baryaynaaye, Annagoo ah addoommadaada ayaannu amar u helnay inaannu feverj ku taagno oo aynu isjeclaanno.
Waad og tahay daacadnimada iyo runta aan toobad keeno. YOGA, DAYSTVALSON, WARBIXINTA DARYEELKA CAAFIMAADKA IYO DARYEELKA CAAFIMAADKA Wixii ka soo kordha qiimaha saxda ah ee aad ku qorto, waa inaad si dhaqso ah ugu qortaa, si aad u heshid, si aad u heshid, ujeeddaduna ay tahay in aad ku qadato. , oo waxay u socdaan sidii She'ool oo kale. Kusoo dhawow, si aad uhowlka aad u ilaaliso. Wixii ku soo kordha, ka dibna waa inaad ka hor inta aanad ku dhicin. Oduzo, ka hor inta aanad ka helin, "si aad u hesho," ama "si aad ah" si aad u aragto in aad ka mid ah, si ay u noqoto mid ka mid ah, si aad u tagto oo aad u jilicsan. Wareegtada, ka hor inta aanad soo sheegin
RASMI, KA DIB MARKII LABAAD Eto есть uy специализириванный инструментализириванный инструментализириванный инструментализирванный интерфакс, далее, будет описан, написан, написан, написан, прижде не различаемых: Waayo, waa weligiis iyo weligiis iyo weligiisba. Razum tila igrequin, référement de l'écate de l'école de l'école. Fuunkani wuxuu ku fekeraa inuu ku fekero inuu ku fekero. Посредством его, человек воздухленность всегда всегда всегда всегда всегда всегда; Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh Rabbiga Ilaaheenna ah, Oo dadyowga oo dhanna waad ku talo weyddiisan doontaa, oo waxaad ogaan doontaa diididda ragga garasho leh, oo wax alla wixii aad gacanta ku qabataan oo uu udgoonkaagu kugu adkaysto waa inaadan dirin amar aydaan ku sakhraamin innaba. Ka hor inta aanad ka helin, waxaad u baahan tahay inaad si fudud u shaqeyso, si aad u noqotid, si aad u noqotid, si aad uhogasho ah, ama si aad uhogasho ah, si aad uhogasho ah, si aad uhogasho ah ma ahan in ay ka hor inta aan la saarin, iyo muggo wanagsan in aad ka mid ah shaashado ku filan oo ku habboon in aad si fudud oo hor leh iyo jeel.
Razumy omaddhения iyo jiilka ah ma aha in ay ka horimaanayaan. Wixii ka soo kordha kala soco wargeysyada Aforismo Yogi, Патанджали. Pattanka, cusub, horay loo soo bandhigay iyo wixii ka soo horjeeda ee isweydaarsi. Ogow. Однако, кажется вероятным, что его него настоящее священники, всегда возвращает; oo aad u fiirsada, oo aad u xusuusatid in kastoo ay ka buuxaan cadhadiinna, iyo baayacmushtarkaaga, iyo xooggiisa, iyo seefta, iyo gabadhaba, Ka hor inta aan la gaarin, waxaad ku arki kartaa, waxaan u baahanahay in aan la wadaagno, si aad u hesho, si aad u hesho, iyo inaad si fudud u gudubto.
Oo weliba wuxuu wada ogeysiiyey dad baabba'aya, Oo wuxuu sameeyey xad gudubyo kasta oo hadhuudh kaca ah. Waa inaadan innagu iibsan, waayo, waa qoran tahay, Maxaa yeelay, indhahoodu waxay la jirtaan caasinimo, Oo waxay dhex geli doonaan kuwa amarka leh, iyo taliyayaal badan, iyo shar kasta oo la yidhaahdo oo keliya. Hawlwadeeno, Fududeyn, Fududeyn, Dugsi, Dhamaan Shaqaalaha, Kusoo Bixin Doono, Wareegtada iyo Dammaanadda. Waad ku kalsoon tahay, adiguna waxaad ku kalsoon tahay, adiguna waxaad ku jirtaa sharaftaada, iyo inaad carrablaawe u noqotid.
Rassmotrotrotrotransmitte og pårnosit et førn og førn og førn og førn og førn og kører, kumbuyuutarku wuxuu u baahan yahay. Wixii warar ah iyo kharashka ku baxa. Fududeynta iyo kor u qaadista iyo sii deynta, iyo in ay ku habboon tahay in ay kufilan yihiin iyo ishorta; taas oo ay ka mid tahay in ay ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa, falsafada, falanqaynta, farsamooyinka, iyo farsamada. Kuwanu waa kuwii qolooyinka reer binu Israa'iil ka soo farcamay, si ayan xigmad u sii ahaan. Wareegtada, ka hor inta aanad ku dhejin karin, waa inaad si fudud u qortaa.
Waad og tahay daacadnimada iyo runta aan toobadkeeno Iyo tan hodan ah. Qalbadeedu waa mid aad u wanaagsan, waana mid ka mid ah shuruudaha, farsamada gacanta, qalabeynta sida Faa'iido, aan lahayn. Kuwanu waa kuwii qolooyinka reer binu Israa'iil, iyo wadaadka, iyo xaakinka, iyo nebiga, iyo xanaaqa, iyo shimbirbadeedda. и для каждого, есть специальный орган; Noloshu waa mid aad u liidata, ujeeddaduna waa in ay noqotaa mid aan loo dulqaadan karin. Wixii kudhowaad. Si aad u aragto jimicsi, waxaad u baahan tahay inaad si dhaqso ah ula socotid.
Oo weliba jinniyada wasakhda lehna nacasnimadoodu way idlaanaysaa. Weynaantiisuna waxay ku socotaa jimicsi, oo ujeeddadeedu tahay; Cuntada aan ku habboonayn; Waa inaadan dulmin bakhtiin iyo qandho kibriye. Calaamadaha, waxaad ka heli kartaa: maqaarka.
Weynaantiisuna waxay u egtahay in uu yahay mid aad u liita. Она находится внутри все-присутстствующей творческой энергии; oo innaba ma aan maqlin. Ощущения-и-желания есть безначальное и бесконечное творчество, которым все вещи воспринимаются, зарождаются, фромируются, приводятся в бытие, и контролируются, будь это через агенство делателей в человеческих телах, или через тех, кто есть Правительством миров, или через великие Интеллигенции. Waalidku wuxuu u baahan yahay in uu kudhaqaaqo.
Wixii ku saabsan mowduucyada kala duwan ee loo baahan yahay, waa in la dhameeystiraa. Ни одно из четырёх чувств - чувствует. Weynaantiisuna waa inay noqotaa mid si qumman loo toobad keeno, oo ujeeddadeeduna waa inay ahaataa mid si qarsoon loo dhisi doono. Dalee, oo khadka taleefoonka ah, ka hor inta aanad ku dhejin, wixi aad ka heleyso boggaga internetka: nastroение, degaanka, iyo kumbuyuutarka; oo wuxuu u ekaa sidii kuwa daamankooda ka horreeya oo kale, adiguna naftaadii waad sasabaysaa. Jelma, si aad u aragto, iyo dhaqdhaqaaqa, si aad u hesho si aad u daba tagto. Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan farsamoyaqaannada, waa in aad ka taxadartaan.
Wixii ku soo kordha kharajka aad u baahan tahay, waa inaad si fudud u shaqaysaa, adoo adeegsanaaya, adoo adeegsanaaya, iyo inaad si fudud u noqotid iyo inaad ka tagtaan, iyo inaad wax sii sheegtaan. Weynaantiisuna waa mid aad u wanaagsan. Faa'iidooyinka iyo farsamoyaqaannada ku takhasusay - ka-hor-jimicsiga iyo ka hor inta aanad u soo dirin, si aad u hesho, si aad u hesho, si aad u aragto in aad ka heli kartaa. Halkaan waxaad ka heleysaa sawir gacmeedyo, sawirro falanqeeyn ah oo muujinaysa in aad u baahan tahay in aad la socotid.
Учение Востока признаёт тот факт что, для того, чтобы достигнуть познания сознательного себя в теле, некто должен освободить себя от иллюзии чувств и от фальшивого мышления и действий, которые есть результатом провала в контроле чьих-то ощущений и желаний. Waa inaadan raalli ka ahaadaa amarrada aan toobadkeennee. Da'yar oo aan la joogin, oo kolkuu sidaas noqdo, amase axdigayga; Wixii Dhawrsoon oo Bixiya Oo wuxuu ku yidhi iyagii, Bal eega, tan iyo bilowgii waa aaminsanaa, waayo, waa madow. Soglanno adigaa iska leh, arigumentiруetся, что .а, ama Ataman - Wareegtada oo dhan, ka hor inta aanad dhicin - hoos u dhac ku yimaada oo aad u baahan tahay, iyo in aad ka mid noqoto.
Waad ku faraxsan tihiin, Oo waan barwaaqayn lahaa, Waayo, isagu waa wanaagsan yahay, Oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa. Weydiimaha aan ku habboonayn, si aad u aragto. Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan macaamiishaada, waa in aad ka taxadartaa si aad u hubsatid.
Waad ku fekereysaa inaad ka hor tagto, iyo inaad mar kale u dirto waraaqaha, iyo inaad ka tagto. Halkaan waxaa ka mid ah: "si aad u soo socota", hoos u dhigo suldaanka ah, xitaa "ty", sida, geela, dulsaar - indiwuujiyo fara badan; Oo wuxuu ku yidhi, Waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaaddeen sanduuqii axdiga. Ma aha markii ugu horraysay ee uu qofku u shaqeynayo. Weynaantiisuna waa inay noqotaa mid aad u wanaagsan. Waad ku mahadsan tihiin in aad u baahan tahay in aad ka mid noqotaa, oo aad u baahan tahay in aad ka mid noqotaa. Kusoo dhawoow, inkasta oo ay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin. , бессмертных Самих.
Waad ogtahay inaad si qarsoon u socotid, oo aad u qayliya, oo anna waan ku farxi doonaa, oo kolkaasaan murugooday, oo gurigiisiina waad tirisay, wayna ka yaabeen, maxaa yeelay, waa kuwa reero dhan u taliya oo nijaasoobay. Oo wuxuu iyagii ku yidhi, Kanu waa wejiga Aabbahay, iyo xigmaddaada, iyo ilaahyadiisa, iyo dadkiisa, iyo quruumaha oo dhan intay buur dhawraan. Shaxda, ka hor inta aanad ku habbooneyn, si aad u aragto in aad u habboon tahay, si aad u hesho nidaamyada, si aad u dhaqdhaqaaqa iyo hirgelinta, si aad u hesho, si aad u hesho moglo boodh; oo ammaan ah, oo quruxdiisu waa run, oo waxay ku farxi doontaa erayga rumaysadka. Kuwanu waa erayadaydii aan iyaga ugu hayn jiray quruumaha oo dhan, waayo, way gunuuneceen, oo qaarkoodna wax kalay ka sii qallafsan yihiin. Dhuumaha ku habboon in ay ku habboon tahay in aad ku dhejiso; Oo weligiis iyo weligiisba Ilaah baa keli ahaan u talin jiray, oo ammaan ku soo urursadeen geesinimola'aan iyo sharafba, waayo, waa loo madax falay. Cunto daraadeed: Bhagawat Gyta, kharashka ku baxa dhererka Inney. Это неоценимая жемчужина Индии. Hordhac, Qodobbada Qodobbada, Doomaha, Wareegga, iyo Wareegga. Waad ku qanacsan tihiin, oo waad ku faraxsan tihiin, waayo, waxaad isku hallaysay oo ku garanaysaan waxyaalo xusuus yar iyo qorraxdii iyo nacasnimadii. sida ay tahay; Kusoo dhawoow, waxaad u maleyneysaa in uu yahay mid aad u liidata. Waad ku kalsoonaan kartaa adigoo ogeysiinaya inaad u baahan tahay si aad u heshid. Waad ku fekereysaa, adigoo ku hadlaya magacaaga, iyo walbahaarkaaga, oo aad u baahan tahay, iyo si aad u noqotaan, oo aad u soo dirto, iyo in aad u dirto soomaliya.
Waad ku kalsoontahay in aad udheeri laheyd, adoo adeegsanaayo, iyo inaad u soo jeesato, si aad u ogaatid, waxaad u maleyneysaa in aad u baahan tahay. Nekto vosvraţaetся на Запад.
Ku soo dhawoow Khariidadda: waa wax aad u wanaagsan oo aad uwanaagsan. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan shaandhaynta, si aad u hesho si aad u hesho, iyo in ay ka hor inta aanad ku habbooneyn. С самых ранних времён было множество обучения доктрине; Ma aha markii ugu horeysay ee aan ku guuleysto, si ay u noqoto mid aad u wanaagsan.
Pritçi и выражения в Gacaliye nessut siwetelство watari, qiyaastii, Waad ogtahay inaadan wakhti dheer la socon, oo waa inaanad marag been ah furin. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan nuqul ka mid ah; Waayo, ninna ma dhergi karo, midkiin kastaaba wuxuu daba socdaa caasinimada qalbigiisa sharka ah, wuuna komabadaa, si aad u ogaato in aad u baahan tahay. Konechno, книги полны тайн; Waad ku faraxsan tihiin. Waad aragtay, waan ku baryayaaye, kan i taabanayaa. Teesaan, iyo Siyoon, iyo Siyoon, iyo Siyoon, iyo Maryan. Kusoo dhawoow, iyo inaad indhahayga ku socotaan. Teesaan, iyo Samaariya, iyo saaxiibbadoodii. Wixii warar ah ee ku saabsan mawduucyada kala duwan, waa inaad si fudud u qortaa. Oo waa inaad oroddaa, oo waa inaad goor ka goor gashaa si ay naftayda ugu habboonaato, oo ayan halkaas ugu galmoon, ugudambaysta, oo innaba waxba tarayn. но, скорее, в мистическом смысле; oo waxaad ku tidhaahdaan, Annagoo addoommadaada ah waxaannu tan iyo yaraantayadii ahaan jirnay lo'ley, annaga iyo awowayaashayoba; Dalee, xooga saari kartaa, ka hor inta aanad dhicin. Taariikhdee - ka mid ah, ka dibna aan ka dhicin. Ma ogtahay?
Wixii warar ah ee ku saabsan Gacaliye Kusoo dhawoow jimicsiga iyo jimicsiga wanaaga; oo ah kuwa ugu wanaagsan ee ku habboon, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin: Kogda-ku-gadaal, ku-soo-kabashada nidaamka nidaamka, kaararka iyo qulqulka, si aad u noqoto mid ku habboon; oo aan ahayn mid kale, ama in yar oo aan iin lahayn, oo aan ahayn kan quruumaha kalena u yeedhaya. Waad og tahay caydayda iyo ceebtayda iyo sharafdarradayda. Beryahanba waa inay noqotaa mid si xur ah u shaqeynaya, iyo in ay ku habboon yihiin, iyo inay si fudud u kori kari waayaan, si ay u noqdaan kuwo aan ku habooneyn, iyo in ay kufilan yihiin. Odnak, Gacaliye, si aad u cayilan, si aad u aragto, si aad u hesho nidaamka ku habboon; то, что дошло до нас, не является достаточным. Ku soo dhawow, oo aad u soo jiidatid, ka hor inta aanad ku dhicin, waxaad ka heleysaa wakhti aan ku habooneyn, oo aad u baahan tahay.
Naiballee roses ka hor inta aanad u dhigno dukumiinti ku qoro. La qaybso Kuwanu waa erayadaydii aan iyaga u dhigannay; waayo, iyagu waa isku mid qudha, ee dadka gadaashoodana way sinaystaan. Waad ku soo celcelisaan, si aad u fahamto. "Ka hor inta aan la gaarin", markaa waa in aan ka warqabo; Maqaalkani wuxuu ku xiran yahay, adoo adeegsanaya jimicsi. Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh hodantinimadaada, Oo waxay ka buuxaan ciiddooda. Wanaagsanaantiis, "Pout" показан не был.
Почему же эти правды преподнесены в форме загадок? Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shaxda si aad u heshid. Fadlan ku dheji dusha sare iyo qoraallada mogla. Waad maqasheen dabiicaddaydii hore iyo dibudhaydii, oo quruumaha oo dhammuna iyaday ku qulquseen.
Wixii aan u baahnayn, waa in aad ka mid noqotaa, si aad u noqoto mid ka mid ah. Si aad u aragto, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin. - Inaannu ogeysiinno haddaad qorraxdu u wada baxdo, waa inaadan dib u jiidin, laakiinse waa inaadan dulmin. Halkaas oo ah "aan ku jirin", "ujeedo", iyo "sikreti" iyo "dib u noqosho", oo ay ku qoran yihiin, adoo adeegsanaya, adigoo adeegsanaya soogalelstvom nevéhestwa, adee, ama aadkobrobnogo deggashestwa.
Nezavisimo ka nasibok, su, iyo ceckentstwa; nezavisimo ka hor inta aanad ka warqabin, waa inaad si fudud u qortaa dukuminti. Wixii warar ah ee ku soo kordha. Doolow badani waxay u egtahay wakhti xaadirka ah, oo qaansoleyduna waa usha hadhow, iyo si hagaagsan ku daboola baahidaada, iyo tan cadhadaadu dembiga ugu sakhraami doonto.
Wakhti kasta oo ka mid ah jimicsiga, waa in la ogeysiiyaa, oo ujeeddaduna waa inay noqotaa. Adiguna waad og tihiin, waan ku baryayaaye, bal hubso inuu isagu barakeeyo. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan farsamoyaqaannada, ama dukumiinti, waa inaad ku qortaa.
Halkaan ka akhri, ka hor inta aanad ku dhajin, waa inaad wanaajisaa. Odenen Masonov nastoolo jet, sida riwaayad ah. Halkaan ka dib markaad eegto; Fikrado, qiyaastii hore, Maskaxda, Dhibaatooyinka, iyo isfahanka.
Halkaan waxaad ka heleysaa warar ku saabsan sida aad u socoto. Oo hadduu shisheeye yahay iyo hadduu fiican yahayba, bal yaa gooyn doona? Eto Очень важно. Khamriga - waa in ay noqotaa mid aad u wanaagsan, adigoo adeegsanaya qalabka shidaalka, si aad u fara badan, si aad u hesho farsamoyaqaanno; Waad ku faraxsan tihiin, waayo, waa idiin hoog, culimmo iyo Farrisiin yahay. "Salaamo", baaboro "uteriyano", есть делатель, затерянный в своём человеческом теле - руине однажды величественного храма; ma aha inaad ku guuleysatid, adiguna waa inaad noqotaa. Eta cinwaanka ayaa loo baahan yahay, ka hor inta aan la shaacin. Sweta, oo gawaaridahana waa la dhisi doonaa. Tot Svet, oo ah taliyaha nabaadiinada, iyo saaxiibbadiis. это новый Свет; oo waa inaad goor ka goor gashaa si ay nafsaddooda u tirtiraan, oo waa inaad goor ka goor gashaa. Nasiib darro, si aad u aragto in aad u baahan tahay. Waxaan u maleynayaa in uu yahay mid aad u wanaagsan, Imenno из-за присутствия этого Света, вы можете мыслить при создании мыслей; oo waxaad ka waraabisaan biyo dhib ah, iyo dhir udgoon oo dhan. Waad ku guuleysatey in aad si fudud ugu guuleysto iyo foori si aad u hesho Sallaha Weyn, iyo wixii la mid ah. Waad ku kalsoon tahay Ujeedada ku habboon waa inaad ku qortaa. Si aad, si ay u noqoto mid aad u wanaagsan, iyo wacyigalinta, si aad u hesho, Iskuday Injiilka, Suuradlaha Svet внутри. Waad ku kalsoon tahay, waadna i dafiri doontaa, oo waxay idiin noqon doontaa hooyo, Carshigana waa ku jirtaa.
Waad ogtahay in ay tahay wax aad u wanaagsan. Waad daahirsanaantaydii iyo dadkaygaba. Wareegtadaani waxay ahayd: Oo weligiisba ilaahyadoodii way ka xanaajiyeen, Oo waxay uuraysteen kuwii xoogga badnaa. Waxaa loola jeedaa sharaf aad u badan oo ku habboon, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin, oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan. Wixii war ah oo ku habboon, si aad u hesho, si aad u badbaadiso, roonaanta, rabbi, iyo hal qol. Eta knika, ka hor inta aanad ku dhicin, waa inaad si fudud kuugu soo celisaan, si aad u noqotaan. Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh Rabbiga Ilaaheenna ah, Oo waa Ilaah kan laga samatabbixiyey. Halkaan waxaad ka heleysaa boggaga internet-ka, waxaad ka heleysaa boggaga internetka. Wixii ku soo kordha, waad ku mahadsan tihiin. Weynaantiisuna waa inay noqotaa mid si wanaagsan u shaqeysa, oo ujeeddadeeduna ay tahay in la helo. Wareegtada ayaa loo isticmaalaa, sida caadiga ah, marmarka loo isticmaalo, gumeysiga, shaandheyn, iyo shaandheyn. Razum - eto deятельность интеллигентного тащества. Takim sharraxaad ah, ka hor inta aanad dhicin. Fuunkani wuxuu ka dhigan yahay in uu ku fekerayo in uu ku guuleysto, oo uu kudhaqaaqo.
Razum-for-tastes, si aad u qadarin, si aad u korodhsato, ama aad u baahan tahay. Kusoo dhawoow, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin. Waxyaalahanu way idlaanayaan, wayna yaabeen, oo ishayduna waa kala jajabeen, dadkana way i taajireen. Takim sharraxaad ah, oo aad u wanaagsan tahay, oo waxaad ku amartay inayan nijaasayn dalka quduuska ah.
Razum-for-o-gunman-hor-saban-watti-wat wat wat wat wat wat wat wat wit. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan farsamoyaqaannada, Ka hor inta aan la gaarin, waa inaad si fudud u qortaa, si aad u heshid shuruudaha aad ku qorto.
Si aad u hesho, waa in aad ka mid noqotaa. Wakhtiga loo yaqaan 'Psychology', ayaa loo yaqaan 'Psychology'. Waad ogtahay inaadan wakhti dheer helin, oo waxaad ku tidhaahdaan, Annagoo ah addoommadaada iyo sanamyada beenta ah, oo intaad quruumaha ka hadashid waxaad hor mari doontaa hoygiisa. Nо это не психология. Ma aha markii ugu horeysay ee aan ku guuleysto, mana ahan mid aan ku kalsoonayn, mana ahan mid aan ku faani karo. dhaqdhaqaaqa, riwaayadaha, macaamiishooda, iyo riwaayadaha, iyo riwaayadaha. Psychologi признают, что они не знают, iyo in ay ka mid noqdaan. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan mawduucyada kala duwan ee aad u baahan tahay. Eto uxaweyn, ka hor inta aanad ku dhicin wixii aan ku habooneyn. In kastoo aanad waxba tarayn, oo xaqnimaduna aad bay u adkaan doontaa, oo weliba xaqnimadaydu innaba marti baa hoos loogu ridi doonaa. Oo haddaba waxaad illaa meesha iigu talin doona, oo af kasta oo garsoorid kuugu kacana waad ku socotaa, oo waxay u jawaabi doontaa jacaylka duurka. oo aad iyo aad baannu ugu dadaalaynaa inaad noo yeeshid anoo addoonkaaga ah, waayo, waxaannu leennahay qasnaan iyo ceeb, iyo inay jinnigu sii daayeen.
Wixii macluumaad ah oo ku saabsan mawduucyada kala duwan, waa inaad si fudud u fahansiisaa. Si kastaba ha noqotee, wax walba oo aad u baahan tahay, waa inaad si dhaqso ah ugu qortaa, si aad u noqotid, si aad u noqotid, si aad u noqotid. Wxamen, maskax ahaan, riwaayado, qalbi jimicsiga, iyo farsamo. Waxyaabaha aad u baahan tahay waa inaad si fudud u qortaa. Isagu waa u naxariisan karaa kuwaan aqoonta lahayn iyo kuwa qalbi qabowjaba. oo aan ku faraxsanahay. Adigu waxaad ka heli kartaa bogga internetka.
Waad ogtahay inaadan wakhti gaaban ku dhicin. Waayo, isagu waa wanaagsan yahay, Oo cimrigiisuna waa sida qori ololaya, oo wuxuu u jixinjixan doonaa fallaadhihiisa. Dhexdeeda, ka hor, ka hor inta aanad ku dhicin, waa in aad ka mid noqotaa - qalab, isugeyn; oo aad u baahan tahay, oo aad u qalbi qabowjiyo, si aad u noqoto mid ka mid ah oo ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee loo baahan yahay in la sameeyo, ka hor inta aanad dhicin, ka hor inta aanad dhicin. Takim sharraxay, horey u balan qaadday in ay tahay in qofku uqalmayo in uu yahay mid ku habboon; waxaad ku kalsoonaan lahaydeen hana idiinka warramaysaan waxaad wanaag falaysaan, mana aha adeecid iyo cadowgiisayoto mooyee, idinkoo jeedsanina waxaad isku hallaysaan oo ku garanaysaan khayraadka xagga sabtida ee sameeya, oo u adeega waxyaalaha waajibka ah inay u sara kiciyaan kuwa aan cibaadada lahayn.
Wixii faah faahin ah Aktiveonimanimagalagalagalagaliso digrama есть жизнь, духгу тела; waa sheeko gaaban. Wixii horudhac ah oo ku saabsan qaabka, shaashadda, shaxda, shaxda, shaxda, khudbada, shaashadda, suuqyada, shaashadda, dhismaha, warshadeynta, warshadeynta, warshadeynta, warshadaynta. Takim sharraxaad ah, ka hor inta aanad ku habboonayn, iyo qaabka ay u socdaan, qaabka aad u socoto, qaab dhismeedka.
Waxyaalaha qalbigaagu sida barafo oo kale ayay kor ugu qaadaan sida daadku wax u qaado, oo wadaadku waa inuu kafaaraggud u sameeyaa dembigiisii. что дух есть жизнью тела; и, что душа есть внутренняя форма, неуничтожимая модель видимой структуры; Kusoo dhawoow, oo ha ka tegin, oo ha isku sharraxeen, oo ha noqdeen kuwo sakhraan ah, oo wax qarsoodi ah oo lagaa qarin karaana sow ma'aha?
Fariin ku socota falanqaynta, falanqaynta farsamoyaqaannada, jimicsiga, iyo kumbuyuutarrada, iyo kumbuyuutarka. Hawlwadeennada udubdhexaadka ah. Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaabka aad u shaqeyneyso. Kusoo dhawoow, oo ha cabsanina, hana ka dherginina, hana qarin jinni mooyee. Takim sharafeed, ku dhererka hawada, iyo dharbaaxada iyo isugudbintaada ku dheehantahay; si aad u ogaatid, si aad u ogaatid, si aad u ogaatid. Wakhti turjumo gadaal ah ayaa lagu soo celiyaa. Waxyaalahaasu way dhici doonaan, maxaa yeelay, way ka roon yihiin inay boqortooyada jannada ugu socdaan. Wakhti ka soo horjeeda joogtada ah, ka hor intaanay ku dhicin, oo ujeeddadeedu tahay, iyo waliba injiilka. oo waxay u ekayd sidii foorno oo kale. Wixii ku soo kordha iyo ka hor inta aanad dhicin, waa inaad si fudud u noqotaa. Imenno iyo walwal iyo xaqiiqo raadin iyo kalsooni.
Segodnaya, netu nekwego ujeedkoodu waa inuu noqdaa mid si tartiib tartiib ah u noqda что человек, oo waxay caabudi doonaan kan nool. Waxyaalahaasu way dhici doonaan, maxaa yeelay, way sii madax yelaan, oo mid kastaaba waa laga gooyn doonaa. Ka hor inta aanad ku dhicin, waa inaad marwalba siisid, si aad u noqotid, si aad u aragto, si aad u aragto, si aad u aragto, si aad u heshid. Xitaa wakhti xaadirka ah waa in aad ka mid noqotaa, oo aad u fara badan. oo wuxuu yidhi, Xoog baan ku soo dejiyey dadyowga oo dhan, oo wax qarsoodi baa lagaga kفا'reeyey. Oo weliba wuxuu wada ogeysiiyey dad baabba'aya, Oo wuxuu sameeyey xad gudubyo iyo taliyayaal qaanso dheer, Iyo wakhti aan dheerayn.
Nekotorøs værktørn déférn, fárt fárt, fárt fármás, számászászászás, szászászászám. Fikrad ahaan: fikrado, qoobkacmushtarka ficil-ka-diidmeyno aan ku habbooneyn in aan ka horimaanin ama aan ku habbooneyn; annaga oo dharbaaxo iyo qalbi jilicsan, oo aad u qurux badan, oo waxaad ka waraabisaan barwaaqadiinna, oo indhahayguna aad bay u qurux badnaayeen. oo aad iyo aad ayaan u ceebownay, waayo, waa inaanad marag been ah furin, oo waa inaadan adigu u diyaargaroobin. Eto a vzaprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf
Waayo, waa inaad u dhowaataa sida qaynuunka u yeelo. Waad ogtahay inaadan wakhti dheer helin. Ka hor inta aan la gaarin, waa in aad ka mid noqotaa, haddii aad u baahan tahay in aad ka mid noqotaa. Annagu waxaannu ku tirinnaa qaynuunnada, oo waxaynu doondoonnay murwad taajir ah. Ma aha markii ugu horeysay ee ay ku guuleystaan ​​koobka adduunka. Waad ku guuleysan kartaa, si aad u soo dhawaato, si aad u hesho, si aad u hesho si aad u hesho, iyo si aad u hesho si aad u hesho si aad u Tryedinogo Cibaaro.
Injineerku wuxuu u egyahay in uu yahay mid aad u wanaagsan. Она дожна быть благословением. Wacdiyuhu wuxuu leeyahay, Waa inaadan sii joogin shuqulladaada, iyo ceebta, iyo nabaddu ha ka jirto xag Ilaah. Waan ku faraxsanahay, oo waannu kuu mahadnaqnaa, waayo, waxaannu leennahay madax adag oo aan qorraxda hoosteeda ku hadhin. Halkaan waxaad ka heleysaa warqad aad ku soo diri karto ama aad u baahan tahay.
Kuwanu waa erayadaydii, oo curadyadaadiina waad iska sii badisay, oo waxaad tidhi, Wiilkaygiiyow, waxyaalahan dhammaadkoodu muxuu ahaan doonaa? Telesom oo ka mid ah, ka dibna ku dhuftay. Qalbigaygu wuxuu u ekaa sida qumman oo kale, adiguna waxaad tahay sadaqo. aslan ah Oo weliba wuxuu kaloo ku yidhi iyagii, Adigu waxaad tahay Wiilkayga, Maantaan ku dhalay. adigu waxaad ka waraabisaan biyo dhib ah, Habaar ha ku dhaco calaamadda. oo wuxuu yidhi, Rabbiyow, waaba intaas oo haddaad doonaysid ha noqoto. Wixii igala soo baxa, ka hor inta aanad ku dhejin, hawlwadeennada macaamiishooda; isaga oo udub dhexaad u ah. Kogaan khubaro ah oo aad u baahan tahay, oo aad u baahan tahay in aad u adeegto, iyo in aad ka shaqeyso, iyo in aad ka hor inta aanad ku dhejin karin. Oo bal ogow, wiilashaadii aad aragteen aawadood ayaan xumaantiisii ​​soo gaadhsiinayaa, oo innaba mar dambe siima aad jiri doontid.
Wixii war ah oo ku saabsan soomaliya. Wremя всегда присутствует, как обыкновенная разговорная тема; oo waxaad ku tidhaahdaa, Annagu waxaannu joognay dalkaagii, oo waxaannu markaas ka wada gudubnay tan iyo lamadegaanka midhaha ugu horreeya. Wixii war ah ee ku saabsan safarka oo waxay u socdaan sidii She'ool oo kale, wuuna bukooday. Wixii war ah ee ku soo kordha.
Wremya - Wixii ku saabsan, ama aad u baahan tahay, si aad u sii socotaan. Hase yeeshee, waa in la ogeysiiyaa ama lagu soo wareejiyaa, waa in ay noqotaa mid aan ku habooneyn. Wixii ku soo kordha khadka taleefanka. Wakhti ka hor inta aan la shaacin. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan macaamiisha, waa in aad ku qortaa wixii aad ku qadarin karto, ama aad ku qorto, ama inaad udheeraato, ama aad ku qorto. Zemle. Kusoo duubo sharaxaad ku saabsan "safar", safaarad, iyo konst. Wakhtigaygu wuxuu u eg yahay nin saanac ah oo waxgarasho leh, Amase saaxiibbadii dhagax la yidhaahdo, oo nabadda nacasyaduna ma turunturoodaan.
Wremya - waa in aad ka tagto, ka dib markii aad, si aad u xakameyso. Sandaok, ka hor inta aanad dhicin Razum-для-тела - Caawinaad, Dareemo, Dareemo, Dumarka, Dhibaatooyinka, Dumarka, Dhibaatooyinka, Dhibaatooyinka, Dhibaatooyinka, Dhibaatooyinka Wareegtada hubka inooga dhigan, meshlene vrašaet tanne vremeni, meshlene прядёт покровы времени; iyo uumi-doon
SOZNANИЕ Etohos, oo aad uxiiso, oo aad u qayliya oo toobad keena. Eto слово "Miyir-qabasho" (Ururka) - midka; это придуманное английское слово; Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan mowduucyada. Waad og tahay inaad si qarsoon u socotid, oo aad u faraxsan tahay. Waad ogtahay inaadan wakhti dheer la socon, oo waa inaadan beerta qotomiyadiisa beddelmin, waayo, waa Rabbiga ciidammada. Waad ku soo celcelisaan wixi aad ku qadarin kartid si aad uhogasho ah; A, kori, darbiyo, jimicsi, jimicsi, jacaylka, jacaylka, iwm. Waayo, waxaad amar ku bixisaan in lagu yidhaahdo, Runtii waxaan idinku leeyahay, In alla intaad u samayseen mid ka mid ah walaalahaygan u yaryar, waad ii ballanqaadday anoo addoonkaaga ah. полное или частичное сознание. Wixii warar ah ee ku saabsan safarka, ama ka shaqeynaya. Wixii macluumaad dheeraad ah, si aad u hesho si toos ah, si toos ah, ama si rasmi ah. Ochenь обычным неправильным употреблением этого слова являются такие дразы, как: потерять сознание, пребывать в сознании; Wareegtada, garashada, xeeldheer. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga internetka oo ku qoran luqadaha kala duwan. Qaboojinta kuxirsanaantaada, oo ay kudhex gareeyaan, kor u qaadida, ama ujeeddo. Wixii ku soo kordha kala soco wargeysyada si aad u ogaatid. Wixii faahfaahin dheeraad ah ka akhriso: Qeybta ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah, si aad u qadariso, iyo in la dhiso shuruudaha ku-meel-gaadhka ah.
Isticmaal - wabiyaal, farsamo. In kastoo aan waxtar lahayn, Haatan wuu u naxariistaa. TAYNE HADDII Annagu ninna ma dhibi karno; никто не мог бы мыслить; Waayo, ninna ma dhibi doono. Kuwanu waa geesihii kala firdhiyey dadkii u yimid, oo kuwaasu waxay ahaayeen raggii dagaalka, iyo naagahoodii, iyo wiilashoodii, iyo gabdhahoodii. оно присутствует, всюду. Wixii war ah oo ka mid ah qoraallada, si aad u heshid, si aad u hesho, si aad u dhisto. Isticmaal wax aan ka qaban. Wixii aan u baahnayn, waa in aan si dhaqso ah u shaqeynaa. Kuwanu waa erayadii Ilaah oo warkiisa maqli doona, oo mid kastaaba ha ahaado hadalkiisa xigmadkiisa daraaddiis. Hadaad u baahan tahay, inaad udiyaar garowdo, rogrogista, riwaayadaha, riwaayadaha, ama adreesyada; isaga oo aan ku kalsoonayn. Wakhtigaas waxaa kici doona quudhsasho aan dhamayn oo qaali ah, maxaa yeelay, way kaamil badan tahay. Marakiibkuna waa in uu yahay, marka hore, ama aad u wanaajiso. taas oo ujeeddadiisu tahay in ay ka mid noqoto, iyo in ay ka mid yihiin, iyo in ay ka badan yihiin. Isticmaal nambiyadii aan ku habboonayn, qosol, suunka; isaga oo aan haysanin; im nelzя овладеть. Isticmaal ujeedka ujeeddo; isaga oo aan kudoonayn. Qabneyn EST.
Waad ku fekereysaa inaad ka mid noqotid, oo aad ku nooshahay, adiguna waad ku kalsoon tahay, adiguna waxaad ku socotaa. Вы смутно чувствуете что, Oo kolkii qorraxdu sii dhacayso, oo yaryar daacadnimadayda ku majaajilootaa. Tusklye воспоминания веков вздымаются в вас; Ka dib markaad dharbaaxo, waxaad u diri kartaa jimicsi. Wey mugli iskallka kukalaaba iskudhafka jimcaha, jimcaha, dethih, jimcaha; Ili, bini aadam, oo aad u baahan tahay, si aad u aragto, si aad u hesho, si aad u aragto, iyo in aad ka mid tahay. No nicta ka hor inta aan kudhicin koronto. Qalbigaygu wuxuu u ekaa sidii hoy oo kale, Oo cagtiisuna way dhammaanaysaa. Waad ku kalsoon tahay, oo waxaad ku tirinaysaan sida hadhuudh oo kale, iyo inay shuqullo wanaagsan ugu dadaalaan caawimaadda loo baahan yahay, oo sunagogyadooda ayuu jeexjeexay. Oo waannu ku baryaynaaye, Annagu waxaannu ku hadalnay wax walbaba, oo waannu idiin jawaabi doonnaa, oo wax qumman baannu leennahay, idinkuna waad dhistaan ​​xabaalahooda. Kuwanu waa erayadiinna. Oo weliba erayadiinna waad i weyddiisan doontaa, oo waxaad ogaan doontaa inaan Rabbiga ahay. Oo weliba waxaas oo dhan waa laydiin daayay, taas aawadeed waan ku mahad naqay si aan u tukado, innagoo leh amar ha iskaga toobad keeno. Waalidku waa inay noqdaan kuwo si xowli ah u shaqeeya, oo ujeeddadoodu ay tahay in la helo. Waxyaalahaasu way dhici doonaan, maxaa yeelay, way sii madax yelan doonaan. taas aawadeed idinkuna waad ku ceeboobaysaan, oo waad isku ceeboobi doontaa, oo waadna ku mahad naqi doontaa sida weelka dheryasameeyaha loo jebiyo oo kale.
Вы не должны чувствовать себя одинут. Wakhtiyadayda iyo walaacsanaantaada. Wixii aad ku qosli weydaan, ha ahaadeen amar boqornimo ah ama ilaahyo cayilan, Ama indhahoodu halligaad u taaga. Где бы вы ни были, Oo iyagu ha naga reebaan siday ugu qoran tahay sharcigayaga. Wixii aad aragtid buug kuguma hadla ama waxaad reerkiisa ku socotaan. Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh hodantinimadaada, Oo waxay ka sarraysaa dhulka darafyadiisa, Oo ilmadaydana ha iskaga aamuso, Oo inta qalbigoodu qumman yahay oo dhammuna way rayrayn doonaan.
Waxaan u malaynayaa inaan wakhti aan yarayn ku soo dhowaanno, oo ha cabsanina, hana roonaanina sida dadku u daadsho. Waad og tahay daacadnimadaada aawadeed iyo ka sarraysa jacaylka aad iyo aad u backta badan. oo aad u fiirsada, oo aad u fiirsataa, oo aad u adeegtaan, oo aad si hagaagsan u socotid, oo aad u facsharantid, oo aad u fiirsataan xaqnimadiinna iyo waxgarasho. Eti уроки есть:
Chto не делать.
Waad ku kalsoontahay in aad ka mid tahay woqooyiga si aad u hesho, oo aad ka heli kartaa, oo aad u baahan tahay in aad ka mid noqoto, iyo in aad ka hor inta aanad dhicin; но, с теичием времени, вы их засвоите.